UYouTube Uyisusile Ividiyo esandula kuvezwa ebonisa uMkhosi odubulayo kwaye uvuthela iReplica Mosque - Usnews
UYouTube Uyisusile Ividiyo esandula kuvezwa ebonisa uMkhosi odubulayo kwaye uvuthela iReplica Mosque
Ividiyo ye-YouTube ebonisa amalungu eqela lomkhosi edubula kwaye ekugqibeleni eqhumisa umfanekiso omncinci we-mosque isusiwe emva kokuba isanda kutyhilwa ngumbutho waseMelika waseMelika.
Ividiyo, ethunyelwe kuYouTube malunga neenyanga ezili-18 ezidlulileyo, yabonisa amalungu eqela lomkhosi waseNorth Dakota Security Force III%, ethatha isikhundla, ejolise, kwaye edubula izixhobo zabo kwinto ebonakala ngathi yimbonakaliso yasekhaya ye-mosque. Le vidiyo, eyalandelwa ngomculo onesingqi esinamandla, yabonisa la madoda edubula ngokuphindaphindiweyo kuloo mosque de yagqabhuka.
Le vidiyo ibonise iimveliso zebhekoni phakathi kweemagazini zemipu. KumaSilamsi aneliso elibukhali, ukutya inyama yehagu akuvumelekanga, njengoko kwakunjalo kubuYuda, yaye ukusetyenziswa kwemveliso yenyama yehagu yindlela eqhelekileyo yokuba abagxeki banyelise unqulo.
Ividiyo yaba wagxeka liBhunga kuBudlelwane baseMelika nobuSilamsi emva kokuba umntu elumkise iqela malunga nobukho bevidiyo.
'Lo mboniso uphazamisayo wobundlongondlongo obujoliswe kwigcuntswana lenkolo yaseMelika kufuneka uphandwe ngabasemagunyeni kunye nabezomthetho, kwaye kufuneka ukhatywe ngamagosa karhulumente kunye neenkokeli zenkolo yazo zonke iinkolo,' utshilo uJaylani Hussein, umlawuli olawulayo kwisahluko saseMinnesota. CAIR, kwingxelo.
UYouTube akasiphendulanga isicelo sokuphawula kwiMC chatel.
Kwiiveki zamva nje, ngakumbi okoko kwasasazwa iividiyo zobuxoki emva kokudubula kwesikolo eParkland, eFlorida, iYouTube ithathe amanyathelo aqatha ngokuchasene neethiyori zeyelenqe ezikhulayo kwiqonga layo, inikezela ngezilumkiso, ezaziwa ngokuba ugwayimbo , ukuya kwi-alt-right amanani kunye neendawo ezifana ne-Infowars.
I-North Dakota Security Force III% yinxalenye yelizwe elikhulu urhulumente ochasene nomanyano amajoni abizwa ngokuba ziipesenti ezintathu. Kwiminyaka yakutshanje, amalungu axhobileyo eqela aye azimasa uqhanqalazo oluchasene neembacu kunye namaSilamsi olwenzeka kulo lonke elase-US. Umkhosi ukhe wazimasa uqhanqalazo oluchasene nokwakhiwa kweemosque kunye neminye iminyhadala ephawuleka ngakumbi, efana nendibano yokubona abantu abamhlophe eCharlottesville, eVirginia, kulo nyaka uphelileyo. Eli qela lihlala lisithi lizimasa uqhanqalazo, iindibano nemisitho yokubonelela ngokhuseleko.
I-WSB-TV / Via youtube.com
Ukusukela ngolwesiThathu ngokuhlwa ividiyo ibisusiwe kuYouTube kwaye endaweni yayo kwafakwa isaziso: 'Le vidiyo isusiwe ngenxa yokwaphula umgaqo-nkqubo we-YouTube wentetho yentiyo.'
Kunyaka ophelileyo, kwaqhushumba ibhombu kwimosque ekwihlomela ledolophu yaseMinneapolis kwaye imosque yaseVictoria, eTexas, yatshiswa yaphela. Ulwaphulo-mthetho lwenzondo oluchasene namaSilamsi-aseMelika luye lwanyuka ukususela ngo-2015, ngokwedatha evela kwi-FBI.
Ebuzwa ukuba ngaba i-FBI ibiphanda amajoni ngokusekwe kumxholo wevidiyo, isithethi se-bureau sathi abanamagqabantshintshi, kodwa yongeza i-arhente kuphela 'iphanda umsebenzi onokuthi wenze ubugebenga okanye ube sisisongelo kukhuseleko lwelizwe' kwaye 'ayinakuqalisa uphando olusekelwe kuphela kuhlanga lomntu, uhlanga, isizwe, inkolo, okanye ukusetyenziswa kwamalungelo oLungiso lokuQala.'
'Ngaphezu koko, i-FBI ayifuni kwaye ayifuni ngcamango yamapolisa,' satsho isithethi. 'Xa umntu ethatha isenzo esinobundlobongela esisekelwe kwinkolelo okanye kwingcamango kwaye aphule umthetho, i-FBI iya kunyanzelisa umthetho.'
Idolophu ibeka iMoratorium kwiZakhiwo eziNtsha zeNkolo emva kokuFunda kwamangcwaba amaSilamsi
Kubekho iiMatshi ezichasene namaSilamsi-kunye noqhanqalazo oluchaseneyo-kwi-US
imibono yokuhombisa kwigumbi lokulala elipholileyo
elona khaya lihle